Bhubaneswar Puri 1 Night / 2 Andro - Tours Luxury India - Tour Operator Bhubaneswar - 91-993.702.7574
Fitaterana Empires - Fanjakana (Lehiben'ny mpanatanteraka)
Toeram-pivarotana ekonomika - Naren Palace (Ac Deluxe Room)
Package Luxury - Onjam-be Mayfair (Premium Room)
Fandefasana - Fiambenana ho an'ny hotely
Fanampiana hafa - Breakfasts
Sokajy: Odisha tenifototra: Fepetra momba ny fianakaviana
TOUR COST : Per Personnes per tour de base (na rupees) Ny salanisa ambany dia tsy manan-kery mandritra ny fe-potoana (Durga puja, taona vaovao & vanim-potoana Chistmass, fialan-tsasam-pirenena, vanim-potoana RathaYatra, vanim-potoana Holi)
Vehivavy voarakitra No Of Pax / Rooms Economique Package Standard Package Deluxe Package Package Luxury
Ac Dzire / Indigo Minimum 02 Pax (efi-trano 01) Rs.3950.00 isam-bolana Rs.5020.00 isam-bolana Rs.6040.00 isam-bolana Rs.8600.00 isam-bolana
Ac Dzire / Indigo Minimum 04Pax (efi-trano 02) Rs. 2540.00 Per Person Per Tour Rs.3620.00 isam-bolana Rs.4640.00 isam-bolana Rs.7200.00 isam-bolana
Ac Innova Minimum 04 Pax (efi-trano 02) Rs.2900.00 isam-bolana Rs.3970.00 isam-bolana Rs.4990.00 isam-bolana Rs.7550.00 isam-bolana
Ac Innova Minimum 06Pax (efi-trano 03) Rs.2310.00 isam-bolana Rs.3390.00 isam-bolana Rs.4400.00 isam-bolana Rs.6970.00 isam-bolana
Ac 13 Seater TT Minimum 08Pax (efi-trano 04) Rs.2900.00 isam-bolana Rs.3970.00 isam-bolana Rs.4990.00 isam-bolana Rs.7550.00 isam-bolana
Ac 13 Seater TT Minimum 10Pax (efi-trano 05) Rs.2550.00 isam-bolana Rs.3620.00 isam-bolana Rs.4640.00 isam-bolana Rs.7200.00 isam-bolana
Adult fanampiny miaraka amin'ny kiraro fanampiny NA Rs.700.00 isam-bolana Rs.1000.00 isam-bolana Rs.1636.00 isam-bolana Rs.3300.00 isam-bolana
Fanampiana amin'ny fahatongavana sy fialana.
Fialan-tsiny momba ny Fizarana fizarana roa miaraka amin'ny sakafo maraina. (Fanamarihana: Ao amin'ny onjan'ny Mayfair ihany, ny Puri Dinner dia ho any).
Fitaovana Ex Luxus ho an'ny famindrana & fitsangantsanganana. (Fanamarihana: ny fiara dia tsy ho afaka mandeha irery fa ho an'ny vahiny isaky ny làlana ary manondro ny fotony).
Ny hetra amin'ny hotely rehetra.
Ny karazana iraisam-pirenena / Domestic Air raha misy nomena azy manokana.
Fiteny Anglisy miteny / fiantohana fiampangan'ny taxi-panjakana.
Extra bed Ny sakafo rehetra (ankoatra ireo voalaza etsy ambony).
Ny fandanian'ny natiora toy ny fiantsoana an-telefaona, ny fanasan-damba, ny zava-pisotro malefaka sy ny zava-pisotro,
Saran'ny fakantsary any amin'ny tsangambato.
Monument OR TEMPLE Fiantohana ny fidirana fiaramanidina fiarabe / fiantohana.
Ny serivisy rehetra any amin'ny seranam-piaramanidina / Rail
Rehefa tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina fiantsonan'ny seranam-piaramanidina Bhubaneswar amin'ny maraina / midnavy, maka & mivezivezy any Puri. I Ernoute dia hitsidika an'i Dhauli (Ashokan Rock Edict sy Shanti Stupa), Pipili (Applique Work Village), Tempolin'i Konark Sun (ilay tranokala malaza malaza antsoina hoe "Black Pagoda"), Tempolin'i Ramchandi & Chandrabhaga Beach. Mankao amin'ny hotely Puri. Mialatsiny & miala sasatra eo amoron-dranomasina / mivarotra eo amin'ny tsenan'ny torapasika. Mijanona ao amin'ny hotely Puri.
DAY 02:PURI - BHUBANESWAR (FIANGONANA)
Vao maraina be ny fitsidihana ny Tempolin'i Lord Jagannath (tsy misy ny Hindus) hijery ny arati maraina. Miverina any amin'ny hotely & manana ny sakafo maraina. Avy eo dia manidina mankany Bhubaneswar. Eto ianao dia hitsidika ny tempoly eo an-toerana toy ny: Tempoly Lingaraj, tempolin'i Rajarani, Tempolin'i Mukteshwar, Zandary Nandankanan (Nakatona tamin'ny Alatsinainy & nisokatra nanomboka tamin'ny 7.30 AM ka hatramin'ny 5.30 PM), Caves-Khandagiri sy Udayagiri Jain zohy. Tara-drivotra hariva any amin'ny seranam-piaramanidina fiantsonan'ny seranam-piaramanidina Bhubaneswar / ho an'ny fiantsenana.
Famafàna alohan'ny andro 60 amin'ny datin'ny Arrivée - 25% ny vidin'ny fandoavam-potoana voavidy
Famafàna alohan'ny andro 30-60 amin'ny datin'ny Arrivée - 40% ny vidin'ny fandoavam-potoana voavidy
Famafàna alohan'ny andro 21-30 amin'ny datin'ny Arrivée - 50% ny vidin'ny fandoavam-potoana voavidy
Famafàna alohan'ny andro 07-21 amin'ny datin'ny Arrivée - 75% ny vidin'ny fandoavam-potoana voavidy
Famafàna ao anatin'ny 07 andro mialoha ny datin'ny Arrival - 100% ny vidin'ny fandaharana isa tsy misy fijanonana
Tsy misy Show sy Check-Out alohan'ny daty fialan-tsasatra - 100% ny vidin'ny total ofisialin'ny fijanonana voavidy voampanga
Tsy manan-kery mandritra ny fe-potoana (Durga puja, taona vaovao & vanim-potoana Chistmass, fialan-tsasam-pirenena, vanim-potoana RathaYatra, vanim-potoana Holi)
Aoka ho voalohany hijery ny "Bhubaneswar Puri 1 Night / 2 Days" hanafoana ny valin-
₹8,000.00 Atao anaty harona
Tsy misy amin'ny andro: 4 NIGHT / 5 DAYS
₹33,679.00 Atao anaty harona